China burner fekitari uye vagadziri | LYBH
Seyemagetsi emagetsi ekubatanidza michina ine yakakwira degree of automation, iyo yekupisa inogona kuganhurwa kuita mashanu masystem: mweya pombi system, kuvesa system, kuongorora system, mafuta system uye yemagetsi control system.
Mhepo inopa system
Iko kushanda kweiyo mhepo yekupa system ndeye kufudza mweya neimwe mhepo kumhanya uye vhoriyamu mukamuri yemoto. Zvikamu zvaro zvikuru ndeizvi: goko, fan fan, impeller fan, mweya wepfuti moto chubhu, damper controller, damper baffle, CAM inodzora mashandiro uye dhisiki disc.
Iko kuvesa system
Iko kushanda kweye kuvesa system ndiko kubatidza musanganiswa wemhepo uye mafuta. Kureba kwemurazvo, koni Angle uye chimiro zvinogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi.
Basa reiyo yekutarisisa system ndeyekuona kushanda kwakachengeteka uye kwakatsiga kweanopisa. Zvikamu zvaro zvikuru murazvo murazvo, kumanikidza kuongorora uye kupisa tarisa.
Iyo mafuta system
Iko kushanda kweiyo peturu system ndeyekuona kuti iyo inopisa inopisa mafuta anodiwa. Iyo mafuta system yeanopisa mafuta anonyanya kusanganisira: pombi yemafuta uye mubatanidzwa, pombi yemafuta, solenoid vharafu, kamwene, rinorema mafuta preheater. Zvinopisa gasi zvinonyanya kusefa, zvinodzora, solenoid vharuvhu boka, kuvesa solenoid vharuvhu boka, mafuta butterfly vharuvhu.
Iyo yemagetsi control system ndiyo yekuraira nzvimbo uye yekubatanidza nzvimbo yemasisitimu ari pamusoro. Chinhu chikuru chekutonga ndicho chirongwa chinodzora, icho chakashongedzerwa nezvirongwa zvakasiyana zveanopisa akasiyana. Iwo mapurogiramu akajairwa anosanganisira: LFL akateedzana, LAL akateedzana, LOA akateedzana uye LGB akateedzana.
1. Kuzara kwakazara, inokwanisa kuchinjika kumanikidziro ekuchinja, kuzvidzora-wega mweya yekuparadzira kamwe, yakazara mwenje.
2. Kuita zvakanaka kwekuchengetedza.
3. Mafuta gadziriro inodzora kuburitsa oiri kudzikisa kudyiwa.
4. Iyo yemagetsi control system inotsvaira mhepo mumasekondi makumi matatu, iri nyore, inokurumidza, yakachengeteka uye yakagadzikana.
5.Kukobvu kupisa kupisa ganda inokwanisa kuchengetedza muchina kubva mukukuvara, kuita muchina kumhanya zvakanaka uye kuwedzera hupenyu hwayo.
Pashure: Super Kutenga kweRubber Kudzoreredza Chirimwa - Imba yemarara tsvina pyrolysis chirimwa - LYBH
Zvadaro: inopisa blast hita
Inoenderera Pyrolysis Miti, Plastiki Recycling Machine, Batch Pyrolysis Chirimwa, Tire Pyrolysis, Dongo Mapurasitiki Refinery, Waste Tire Kudzokorora Muchina,